शुक्रकीटको गुण बढाउन पुरुषलाई गोलभेडा !
गोलभेँडामा पाइने लाइकपीन नामक पोषक तत्त्वले पुरुषमा शुक्रकीटको गुण बढाउने एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ । प्रत्येक दिन गोलभेँडाको दुई चम्चा गाढा लेदो (प्युरी) सेवन गर्ने स्वस्थ पुरुषमा गुणात्मक रूपमा राम्रो शुक्रकीट बनेको पाइएको छ ।
सन्तान जन्माउन नसक्ने दम्पतीमध्ये आधाजसोमा पुरुषमा बाँझोपन भएको पाइन्छ । विज्ञहरूले पुरुषमा हुने बाँझोपनको समस्याबारे थप अध्ययन हुनुपर्ने औँल्याएका छन्।
एनएचएसले गर्भाधानको सम्भावना बढाउन यथासम्भव तनाव घटाउन तथा महिलाको अण्डोत्सर्जनको बेलामा यौन सम्पर्क गर्न सुझाव दिएको छ । तर केही पोषक तत्त्वले पुरुषमा पुंसत्व बढाउने अवधारणा केही समययता प्रबल रूपमा देखिएको छ ।
पहिलापहिला गरिएका अनुसन्धानहरू भिटामिन ई र जिङ्कको प्रभावमा केन्द्रित थिए । तिनमा जस्तै लाइकपीनमा पनि कोषलाई अक्सिजनबाट हानि पुग्न नदिने एन्टीअक्सिडन्ट गुण हुन्छ । यो तत्त्वले हृदयरोग र केही प्रकारका क्यान्सरको जोखिम घटाउन सघाउने देखिएको छ ।
खाद्यपदार्थमा पाइने लाइकपीन सोस्न शरीरलाई गाह्रो हुने भएकाले यो अध्ययनमा सहभागी मानिसलाई अतिरिक्त ल्याक्टोलाइकपीन दिइएको थियो। त्यसरी प्रत्येक पुरुषले उही मात्रामा उक्त तत्त्व पाएका थिए । उही मात्रामा लाइकपीन पाउन प्रत्येक व्यक्तिले पकाएको दुई किलो गोलभेँडा खानुपर्ने हुन्थ्यो ।
बाह्र हप्ता चलेको परीक्षणमा ६० जना सहभागी भएका थिए । प्रत्येक पुरुषलाई प्रत्येक दिन १४-१४ मिलिग्राम ल्याक्टोलाइकपीन दिइएको थियो ।
यो अध्ययन लाइकपीन उत्पादन गर्ने कम्पनीले आंशिक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । उनीहरूको शुक्रकीट अध्ययनको प्रारम्भमा, छ हप्तामा र अन्तिममा जाँचिएको थियो ।
शुक्रकीटको परिमाणमा भिन्नता नभए पनि अतिरिक्त लाइकपीन सेवन गरेका व्यक्तिमा स्वस्थ शुक्रकीट र तिनको गतिशीलताको अनुपात बढेको पाइयो ।
यूनिभर्सिटी अफ शेफील्डसँग आबद्ध पोषणविद् डा. लिज विलीअम्जको नेतृत्वमा भएको शोध युरोपियन जर्नल अफ न्यूट्रिशनमा प्रकाशित भएको छ । “तत्काल पुरुषलाई हामीले दिन सक्ने सुझाव धेरै कम छ,” उनले भनिन् ।
“हामी उनीहरूलाई मदिरा सेवन घटाउन र स्वस्थकर खानेकुरा खान भन्छौँ । तर यी सामान्य सुझाव हुन् ।” उनले भनिन्, “यो सानो अध्ययन हो र हामीले यो ठूलाठूला परीक्षण गर्नुपर्छ । तर परिणाम धेरै उत्साहप्रद छ ।”
उनका अनुसार अब पुंसत्वसम्बन्धी समस्या भएका पुरुषमा यो परीक्षण गरिनुपर्छ । त्यसबाट लाइकपीनले शुक्रकीटको गुण बढाउन तथा जोडीहरूलाई गर्भाधान गर्न तथा बाँझोपनसम्बन्धी महँगो उपचारविधिबाट जोगिन सघाउँछ कि सघाउँदैन त्यो देखाउन सक्नेछ ।